ကျလိကျလိ ပစ်စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » ကျလိကျလိ ပစ်စာ	17
Posted by ဂျစ်စူ on Dec 12, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Think Different | 17 comments
အမှိုက် ကောက်တယ်ဆိုလဲ ပီပီပြင်ပြင် ကောက်ကြဗျာ
ရှုတင် ဗွီဒီယို ရိုက်တယ်ဆိုလဲ ပီပီပြင်ပြင် ရိုက်ကြဗျာ
စောက်ပဲ ကြီး ပဲလေးနဲ့ ပို့စ် ပေးမနေနဲ့
အမှိုက်ကောက်တဲ့ နာရီပိုင်း ဇာတ်ဝင်ခန်းရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး
သေတဲ့ထိ ရိုက်သွားရမဲ့ တစ်ဘဝစာဇာတ်ဝင်ခန်းဗျ
သူများယောင်တိုင်း လိုက်မယောင်လို့ ဘသူမှဘာမှမပြောဘူး
မြေမထိ ရေမထိ တို့စိစိလုပ်နေတယ်
အပေါ်ယံဖောရှောတွေ ရေလည် အားကြီးစောက်မြင်ကတ်တယ် ခွီး..ခွီး..ဂီး..။
Shwe Ei says: -ညီး ကိုယ်တိုင်အစမ်း ကောက်ပြလိုက်ပါလားအေ..
-နောင်လာနောင်သားတွေ အတုယူလို့ရအောင်ပေါ့ ..ေိေိေိ
-ပီးမှ သဂျီးရဲ့ သတင်းစာဂျာနယ်ထဲမယ် ပုံနဲ့တကွ ထည့်ပေးလိုက်ရင်..
-အမေဂျီးကားထိ နံမယ်ပေါက်သွားမှာဘဲ..စိန်ပေါက်ပေါက်ရဲ့ :LOL:
E.မြောက်မြောက် says: စူလို့ မီကောက်ခင်ထဲက ဝှက တီယောက်ထဲ ကောက်နေလာ
ပြောမှ သိ ထိမှ နာ အီစားထဲ ဝှ မီပါဝူး
မီယုံ ဝှ အိမ်လာကျိ
ဝှက မြွေးမြူရေးလဲ လုပ်လယ်လေ
မြစပဲရိုး says: ပြောပလိုက်။
မြောက် နောက်မှာ အရီး ရှိလယ်။
အမှိုက်ကောက်တာ လယ်ဒီရှူး ဒေါက်မြင့် ကြီး နဲ့ မမများ လဲ တွေ့တယ်။ Haaaaa. :-)))
E.မြောက်မြောက် says: လုလဲ အားကျားမခံ ကီလမ ခြေထောက်နဲ့ ကောက်ဝေ့
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ လည်းး ပြောချင်နေတာအေ…!!
ပြောပြန်ရင်လည်းး မဆိုင်တဲ့ ခေါင် လာထိမစိုးလို့ ခု ဖွဘုတ် ကို သွားးဘူးးးးး
ပါးစပ်ပိတ်ထားးတယ်.. သူတို့ လုပ်မှ ကမ်ပိန်းးရဲ့ image ကို ထိလို့ ဒေါသဖြစ်နေရတယ်…
E.မြောက်မြောက် says: စည်ပင်တွေ သိက္ခာကျပါလယ်ဝေ
alinsett says: အမှိုက် မကောက်ချင်ရင်နေပါ—
အမှိုက် ပစ်မချရင်ကိုပဲ တော်လှပါပြီ
E.မြောက်မြောက် says: ညေးပေါဒါ ကွီးလက်ခံဒယ်
kai says: အင်္ဂလိပ်ခေတ်က.. ရန်ကုန်အမှိုက်ကောက်အလုပ်ကို ဘယ်သူတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်.. သိလား..။
E.မြောက်မြောက် says: ဘွားဒေါ်ကမှ ဂယ်ကောက်သေးတယ်
တစ်ချို့တချို့ က လူမြင်ကောင်းအောင် ကောက်နေဒါ
ကိုယ်တိုင်မကောက် ကောက်ပြတဲ့လူကို ဝေဘန်တယ် ထင်နေကြရင်..
ဘွားကြီးက ကောက်ကြပါဟဲ့ဘို့ မပြောခင်ထဲက ကျုပ်ကောက်ပြီး မီးရှို့ခဲ့ဒဲ့
အမှိုက်ပြာတွေ မိလ္လာ ကျင်းဟောင်းထဲမယ်အပြည့် စိဒယ်
မြစပဲရိုး says: အသိ ရဲ့ အသိ အင်ဒုံနီယာ ကြီးတစ်ယောက် က အင်ဒုံနီယာ အသင်း နဲ့ မနေ့က အမှိုက်ကောက်လိုက်တာ။
ခါးနာသွားလို့ ဆိုလား။ lol:-))))
ကိုယ်ရှင်းထားတော့ အဲဒီ မှာ အမှိုက် ကို ကိုယ်ပြန်ပစ် မိဖို့ ခက်သွား မဲ့ သဘော။
သူများလုပ်ထားရင်တော့ သိပ်တန်ဖိုး မထားတတ်ဘူးမဟုတ်လား။
လေဒီ ဆိုတာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး။ အကျိုးမဲ့ ဖြစ်စရာ အကြောင်းဘာမှ မလုပ်ဘူးကွဲ့။ :-))
E.မြောက်မြောက် says: အမှိုက်ပုံးတွေ များများထားပေးဖို့လဲ လိုပါသေးတယ်
တစ်နေ့ မြို့ထဲသွားရင်း အမှိုက်ပစ်ဖို့ ပုံးလိုက်ရှာတာ မတွေ့လို့
ဘီအီးပုလင်းခွံကို ရေမြောင်းထဲပဲ ပစ်ချခဲ့ရတယ်
မပစ်ခင် သေချာကျိပါသေးတယ် လူရှင်းမရှင်း..အဲလေ
ပစ်ပြီးမှ အမှိုက်ပုံးကြီ နှစ်ပုံးတောင် တွေ့ပါရောဗျာ
အဲဒါတော့ တတ်နိုင်ဘုလေဂျာ တားမှ မတိတာဂိုးလို့
မြစပဲရိုး says: ဘီအီး ပုလင်းက ပြန်ရောင်းလို့ မရဘူးလား မြောက်လေး ရဲ့။
Shwe Ei says: -အရီးပြောတာမှန်တယ်..
-အမှိုက်ဆိုတိုင်းလဲ အမှိုက်ပုံးထဲ လက်လွတ်စပယ် ပစ်မထည့်သင့်ဘူး
-recycle လုပ်လို့ရတဲ့ အသိလဲ ခေါင်းထဲမှာရှိရမယ်
-သများဆို ပုလင်းဒေ ပုလင်းဒေ ဘယ်တော့မှ လွှင့်မပစ်ဖူး
-စုထားပြီး တော်တော်များမှ အမှိုက်သိမ်းတဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းရဲ့
-လက်ထဲကို ရောက်အောင်ထည့်တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
E.မြောက်မြောက် says: အာဂျာ
ပုလင်းတကိုင်ကိုင်နဲ့ ၃၉ ဗိုက်ပူ တိုးစီးပြီး ဘိုပြန်ရမှာရဲဂျ
ပို့ချင်လဲ ဘီယက်နမ်ပဲ ပို့
ငု ရင် ထရန် ဟု ရမ် မေ…နဲ့ ဘီအီးပစပ်စုံ သွားသောက်မို့
နာမယ်ခေါ်ရဒါနဲ့တင် မောအိတာ အဲ လက်ညောင်းအိတာ
မြစပဲရိုး says: ခါးကြားထိုးထားပေါ့။ အမူးဆရာများ လုပ်နေကျဟာကိုများ။
အဲဒီ မိန်းကလေး ကို “ငု” လို့ ခေါ်လေ။ မင်း ကို ဘယ်သူက အမည်ရှည်ရေးခိုင်းနေသလဲ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အမှိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုက်ကိုဖြစ်နေတာ ကြာပြီ . . . အမှိုက်ကို ခွဲမပစ်ဘဲ အကုန်ရောပစ်တော့ ဘယ်လို recycle ပြန်လုပ်မတုန်း . .